Farmaajo oo si hoose u beecinaya Shidaalka Soomaaliya | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo oo si hoose u beecinaya Shidaalka Soomaaliya
DUBAI – Sida ay Keydmedia Online daabacday 28 October 2021, Dowladda Soomaaliya ayaa ka qeyb galeysa shirka todobaadka Shidaalka Africa, kaas oo berri oo ku beegan Sideedda ilaa 11-ka bishan November, ka dhici doona, dalka Isutagga Imaaraadka Carabta. [Halkaan ka aqriso qoraalka KON].
Madashaan oo kulmi doonta waddamo dhowr ah oo dhaca qaradda, shirkado caalami ah, dad maalgashadeyaal ah, iyo shirkadaha saliidda dhoofiya, ayuu waddan kasta xaq u leeyahay inuu soo bandhigo saliidda iyo gaaska uu heysto ee iibka u ah.
Soomaaliya, waxaa kaga qeyb galaya wafti uu hoggaaminayo, Wasiirka Wasaaradda Batroolka & Macdanta, Cabdirashiid Maxamed Axmed, isla-markaana ay xubno ka yihiin, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda iyo Maamulaha guud Hay’adda Shidaalka Soomaaliya.
Kooxda Farmaajo, waxaa hore si xooggan loogu dhaleeceyay in ay jebkooda ku shubteen malaayiin doollar oo laga soo qaaday shirkado loo saxiixay ruqsadaha baarista Shidaalka badda Soomaaliya.
Wasaaradda Batroolka & Macdanta, si daahfuran uma aysan caddeyn, qorshaha socodkooda iyo xogaha la xiriira kheyraadka ay la wadaagi doonaan shirkadaha caalamiga ah iyo maalgashadeyaasha ka qeyb galaya madasha.
Bogga wararka ee Keydmedia.net, kala soco xogaha AFRICA OIL WEEK, oo KON ay indhaha ku heyso.